Ndkpụrụ Onye Mmepụta Ekwentị Ọ bụla Kwesịrị Knowmara Maka 2020 | Martech Zone
N’ebe ọ bụla ịlere anya, o doro anya na teknụzụ mkpanaka abanyela n’ime ọha mmadụ. Dabere na Nchọta Azụ Azụmaahịa, nha ahia ahia nke uwa ruru $ 106.27 na 2018 ma buru amụma iru $ 407.31 site na 2026. The uru ngwa na-eweta na azụmaahịa enweghị ike ịkọwapụta. Ka ahịa ekwentị na-eto eto, mkpa ụlọ ọrụ na-etinye ndị ahịa ha na ngwa mkpanaka ga-adịwanye elu.
N'ihi mgbanwe nke okporo ụzọ site na mgbasa ozi weebụ ọdịnala gaa na ngwa mkpanaka, oghere ngwa ahụ agafeela ngwa ngwa nke mgbanwe. Site na ụdị ngwa ọdịnala na ngwa ngwa ngwa mkpanaka, enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle mgbe ị kpebiri ịzụlite ngwa maka azụmahịa gị. Naanị iwupụta ngwa na ịtụba ya na ụlọ ahịa ngwa anaghị arụ ọrụ nke ọma maka ịtụgharị ndị ahịa. Ezi ntinye aka na ntughari choro ihe omuma nke onye oru.
Ihe ndị ahịa na-achọ na-agbanwe agbanwe na-agbanwe ahịa chọrọ, yana iji echiche echepụta maka mmepe ngwa gị dị mkpa. N'iburu nke ahụ n'uche, enwere ụfọdụ usoro imepụta ngwa mkpanaka sitere na 2019 nke ị kwesịrị iburu n'uche n'oge usoro mmepe nke nwere ike ịkọwa 2020.
Trend 1: Kere na mmegharị ọhụụ na uche
Mmegharị ahụ ndị eji eme ihe eji arụ ọrụ na ngwa mkpanaka ruo ebe a bụ swipes na clicks. UI Mobile UI di na 2019 weputara ihe amara dika Mmegharị Tamagotchi. Agbanyeghị na aha ahụ nwere ike ibute ọgbụgba azụ na anụ ụlọ mebere, Tamagotchi Gestures na ngwa mkpanaka bụ maka ịgbakwunye ogo nke mmetụta na nke mmadụ. Ebumnuche nke itinye atụmatụ ndị a n'ime imewe gị bụ iwere akụkụ nke ngwa gị ndị na-adịghị arụ ọrụ nke ọma n'ihe banyere ojiji ya ma welie ya nke ọma nke ndị ọrụ na-eme iji melite ahụmịhe ha n'ozuzu ha.
Na-emechi mmegharị Tamagotchi, usoro a na-eji agagharị agagharị ga-enwe ndị ọrụ na-etinye aka na ihe ngebichi site na iji mmegharị ahụ na ịpị. Site na mmepe nke swipe texting na swipe mmegharị tinye n'ọrụ dị ka ihe bụ isi na njirimara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, swiping abụrụla ụzọ dị mma iji mekọrịta na ihuenyo mmetụ karịa ịpị.
Trend 2: Nọgidenụ Screen Size na Wearable Technology na Uche Mgbe emebe Mobile ngwa ọdịnala
Enwere otutu di iche ma a bia na nha ihu. Site na ọwatụwatụ nke smartwatches, ụdị ihuenyo amalitela ịdị iche iche. Mgbe ị na-ekepụta ngwa, ọ dị oké mkpa ịmepụta nhazi azịza nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ebumnuche na ihuenyo ọ bụla. Site na uru ọzọ ị na-adaba na smartwatches, ị ji n'aka na ọ ga-adịrị ndị ahịa gị mfe iwebata ngwa gị n'ụzọ dị mfe ma dabara adaba na ndụ ha. Ndakọrịta Smartwatch na-aga n’ihu na-ebuwanye ibu, na dịka nke a bụ isi ụzọ UI mkpanaka na 2019. Iji gbaa akaebe na nke a, na 2018, e nwere nde smartwatches 15.3 rere na United States naanị.
Wearable technology bụ ụlọ ọrụ ga-anọgide na-eto ma kọwaa ụdị ngwa eji eji ngwa eji eme ihe n'afọ a. N'ọdịnihu, ngwa ga-etinyerịrị ọrụ eziokwu bara ụba maka iko iko. Mepụta atụmatụ AR ugbu a na itinye atụmatụ ndị ahụ n'ime ngwa mkpanaka nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa n'inweta iguzosi ike n'ihe nke ndị mbụ nabatara.
Nddị nke atọ: Appdị ihe eji eji ngwa ngwa eji eme ihe na-emesi atụmatụ agba ike
Agba na-egosipụta akara gị ma nwee njikọ chiri anya na njirimara akara gị. Ọ bụ ụdị njirimara ahụ na-enyere ndị azụmaahịa aka ijikọ ndị ahịa ha n'ọdịnihu.
Agbanyeghị na atụmatụ ụcha nwere ike ọ gaghị adị ka ọ ga - abụ nchegbu bụ isi ma ọ bụ ụdị ngwa ngwa doro anya, mgbanwe aghụghọ na agba nwere ike bụrụ ihe kpatara mmeghachi omume ọma ma ọ bụ adịghị mma na ngwa gị - echiche izizi na-eme ihe niile dị iche.
Otu ụdị ngwa eji eji ngwa mkpanaka eji arụ ọrụ ugboro ugboro bụ ngwa nke gradients agba. Mgbe agbakwunye gradients na ihe mmekọrịta ma ọ bụ nzụlite, ha na-agbakwunye vibrancy nke na-eme ka ngwa gị nwekwuo anya ma na-apụ apụ. Na mgbakwunye na agba, ịgafe akara ngosi static na itinye animation enwegoro nwere ike ime ka ngwa gị tinyekwuo aka.
Ndzọ nke 4: Iwu UI Mobile Mobile Nke Na-adịghị Adịkarị Style: Keepdebe Ya Dị Mfe
Onweghi ihe na - eme onye ahịa ka ihichapụ ngwa gị ọsọ ọsọ karịa mgbasa ozi intrusive ma ọ bụ njirimara ọrụ dị mgbagwoju anya. Na-ebute ihe doro anya na arụmọrụ karịa ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ga-eme ka ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma. Ọ bụ otu n'ime ihe mere eji eji ngwa eji emepụta ngwa ngwa na-emesi ịdị mfe kwa afọ.
Iji mezuo nke a, ọ dị mkpa iji ohere dị iche iche nha ihu, dị ka ekwuru na mbụ. Obere ihe na-eme ka ndị mmadụ lekwasị anya n'otu ihe n'otu oge ma zere ịba ụba nke na-emekarị ka ndị mmadụ nwee ahụmịhe na-adịghị mma. Otu ihe dị mfe iji mejuputa atụmatụ maka mkpanaka UI imewe bụ njikọta nke ahụmịhe ọnọdụ ahaziri iche. Ndị a na-eji ọrụ ọnọdụ ndị ọrụ ekwentị ejirila ịnụ ọkụ n'obi were oge ka oge na-aga.
Ndzọ nke 5: tilmịnye Sprint Stage nke Development
Usoro mmepe nwere ọtụtụ nkebi, site na mbido imepụta ihe ngwa mockup ngwaọrụ iwu ulo, nwale ma malite ngwa. Mbido mbu na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịchọpụta mpaghara ndị ọrụ gị na-etinye oge kachasị ma hụ na mpaghara ndị ahụ na-akọ akụkọ banyere akara gị mgbe ị na-enye ndị ọrụ ahụmịhe ahụmịhe pụrụ iche. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na usoro a dabara na ndepụta anyị nke usoro ngwa ngwa mkpanaka iji lelee.
Họrọ itinye aka na nke mbụ 5-ụbọchị imewe Sprint nwere ike inyere aka ịchọpụta ma mee ka ebumnuche maka ngwa ahụ sie ike. Tụkwasị na nke a, iji nchịkọta akụkọ na iwulite ihe izizi iji nwalee ma nakọta nzaghachi nwere ike ime ma ọ bụ mebie ngwaahịa ikpeazụ. Usoro a na - eme ka ị banye na mmepe mmepe yana akọwapụtara nke ọma, ebumnuche ahọrọ nke ọma. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị obi ike na ọrụ mmepe ngwa gị ga-eme ka ịtụgharị echiche ahụ bụrụ eziokwu.
Gbaa mbọ hụ na ngwa ngwa mkpanaka gị kachasị mma
Zụlite ngwa mkpanaka na-aghọ ihe achọrọ maka itinye aka na ndị ahịa. Ihe dị oke egwu bụ ịhụ na ngwa ahụ mepụtara bụ nke dị mma ma na-enye ezigbo ahụmịhe ndị ahịa. N'ezie, 57% nke ịntanetị Ndị ọrụ kwuru na ha agaghị akwado azụmaahịa nwere usoro ịntanetị na-adịghị mma nke ọma. Ihe karịrị ọkara nke okporo ụzọ ịntanetị nke ụlọ ọrụ na-abịa site na ngwaọrụ mkpanaka. N’iburu nke ahụ n’uche, UX bụ akụkụ kachasị mkpa maka ịhapụ ngwa ahịa. Ọ bụ ya mere idebe ihe dịka ngwa eji eji ngwa eji arụ ọrụ n'uche dị oke mkpa.
Mbughari agagharị na-agba okooko. Flourga nke ọma na ahịa ahịa nke oge a, ịnakwere teknụzụ dị elu, na-agba ọsọ nke ọganihu, yana ịmara ụdị ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ na-eme ka ị hụ na ị bara uru ma nwee ike ị nweta ihe ndị ahịa gị chọrọ.
Tags: agba ngwa ngwa ekwentịngwa mmepe nke ngwa mkpanakamobile ngwa urungwa mkpanaakamobile ọrụ interfaceSprintmmegharị nke tamagotchiọnọdụteknụzụ siri ike
Tupu ịmalite ụlọ nyocha Label Blue na 2009, Bobby bụ onye njikwa Mmemme na Microsoft n'ime nke sava & Ngwaọrụ. Ya na onye nchoputa bu Jordan Gurrieri, Bobby dere Appsters: Ntuziaka onye mbido nke ngwa ahịa. Na Lablọ nyocha Label Blue, ọrụ Bobby dị ka CEO gụnyere inye nlekọta dị oke mkpa na teknụzụ maka ngwa niile anyị mepụtara. Bobby gụsịrị akwụkwọ na Mahadum nke Waterloo na Bachelor nke Mgbakọ na Mgbakọ na Kọmputa Science wee gụchaa MBA na Columbia Business School. Ọ hụrụ crepes n'anya.